चर्चामा 'जाली भन्छौ किन ?' सार्वजनिक (भिडियो) | दर्पण दैनिक
चर्चामा 'जाली भन्छौ किन ?' सार्वजनिक (भिडियो)
प्रकाशित मिति: २०७८ मंसिर ११ गते ०७:३२
काठमाडौं । लोक दोहोरी गीत 'जाली भन्छौ किन ?' सार्वजनिक भएको छ। अकला देवी म्युजिकले भिडियोसहित लोक दोहोरी गीत सार्वजनिक गरेको हो । रामजी खाँड, अर्जुन सापकोटा र टंक डुम्रेले स्याङ्जा प्रतिनिधिको भूमिकासहित स्वर दिएको गीतमा गायिका सुनीता बुढाले झापाको प्रतिनिधित्वमा स्वर भरेकी छन् । यो गीत सामाजिक सञ्जाल टिकटक, युट्युब तथा फेसवुकमा निकै रुचाइएको छ ।
दुःख पर्दा सधै गुन लगाएपनि जाली भनेकोमा स्याङ्जालीको दुखेसोबाट गीत सुरु हुन्छ। यसमा उनीहरूलाई रिस उठेको भाव व्यक्त गरिएको छ । स्याङ्जालीहरू सोझासाझा, सरल र इमान्दार हुँदाहुँदै पनि जाली भनिएकोमा उनीहरुले झापालीप्रति 'क्रोध' देखाएका छन् । झापालीको प्रतिनिधित्व गर्दै गीत गाएकी बुढाले भने स्याङ्जालीहरूले झुट कुरा बोल्ने र अरूको कुरा काट्ने प्रवृत्ति हुने आरोप लगाएकी छन्। स्याङ्जालीहरूभन्दा झापालीहरू राम्रा र इमान्दार हुने दाबी गीतमा गरिएको छ ।
विशेषगरी राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्रमा झापाली र स्याङ्जालीका विषयमा सुनिने विभिन्न किस्साले गीत लेख्न प्रेरित गरेको गीतकार डुम्रेले बताए । गीतको भिडियोमा रामजी खाँड, डुम्रे र अर्जुन सापकोटाले स्याङ्जालीको भूमिका निभाएका छन् भने आस्था थापाले झापालीको प्रतिनिधित्व गरेकी छन् । यज्ञ सापकोटाले संगीत भगरेको गीतको म्युजिक भिडियोको निर्देशन मदन खड्काले गरेका हुन् ।